Apple Store vaovao no misokatra ao Bruxelles | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | | Apple Store, Apple products
Taorian'ny fanombohany tamin'ny fomba ofisialy dia nanolotra fitsangatsanganana an-tserasera ny haino aman-jery ao an-toerana Apple Store voalohany any Belzika, izay iray ihany koa amin'ny karazany iray, tsy hoe satria misokatra ao Bruxelles izy io, fa satria izy no namboarin'ilay Lehiben'ny Designer an'ny Apple, Jonny Ive, izay miara-miasa amin'i Angela Ahrendts. Ity magazay vaovao ity dia endrika iray izay toa miparitaka amin'ny Apple Stores rehetra miaraka amin'ny fikasana hanome endrika kely ny fivarotana Apple erak'izao tontolo izao ho iray amin'ireo lahasa manokana nataon'i Jonny Ive.
Ny fivarotana dia misy fahasamihafana marobe manoloana ny sisa amin'ireo fivarotana Apple, ohatra, ny iray amin'ireo rindrin'ny fivarotana dia anjakan'ny fampirantiana ary koa plasma lehibe iray, tsy ny hampiroborobo ny vokatra Apple ihany, fa ny ampiasaina amin'ny hetsika izay mitranga ao amin'ny magazay. Inona koa, manana hazo valo, raha mamaky tsara ianao dia hazo valo ao anaty magazay. Tsy azoko antoka fa ilaina izany ao anatin'ny Apple Store, fa azoko antoka fa manana fanazavana tsara momba an'io i Jonny Ive, na tsia ...
Ny Bar Genius dia nohavaozina tanteraka, izy ireo dia hodidinin'ireto hazo valo sy latabatra roa lehibe itompoana ny mpanjifa ireto. Ka Apple dia mikendry ny hahatsapa hafanana sy fisokafana eo am-piandrasana eo afovoan'ny hazo ary hipetrahana ho an'ny Genius anao hanompo anao. Ity Apple Store ity dia manana fampirantiana ny Apple Watch, na dia mahaliana aza ny Apple Watch dia mbola tsy misy any Belzika. Ny fisokafana amin'ny fomba ofisialy dia amin'ny asabotsy 19 septambra, ka raha mahatratra anao eo akaiky eo izy dia fotoana mety hanatrehana ny Apple Store irery amin'ny faritany belza iray manontolo mba hitsangatsangana ary raha tianao dia mividiana zavatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Store » Ny voalohany amin'ny Apple Stores dia misokatra any Bruxelles
Ho ahy, Jonny Ive dia afaka mametraka ireo hazo any ... tsy azon'ny masoandro izy. Ary manasoa antsika rehetra ve, atsaharo ny "Cookies" maloto ary manompoa olona araka ny tokony ho izy. Mba hikarakarana izany ao amin'ny Genius Bar, mila manao fotoana mialoha efa ho tapa-bolana mialoha ianao ary raha sendra vonjy maika, dia tsy misy andriamanitra hikarakara anao ao amin'ilay fivarotana COOL ambanin'ny oronao.
Niresaka betsaka momba ny fivarotana taranaka vaovao izy ireo ary ny hany mampiavaka azy amin'ny hafa dia hazo 8, satria ny Apple dia midika hatrany fa manodinkodina an'izao tontolo izao manao zavatra tsy misy dikany ihany izy fa amin'ny farany dia tsy misy mahatsikaritra amin'ity tranga ity izy ireo. Hazo 8
Eny, ny 3D Touch dia azo ampiasaina amin'ny mpiaro lamba